Indlela yokulungisa izinwele nesikhumba sakho ngamaholide asebusika - Ubuhle 2022
Indlela yokulungisa izinwele nesikhumba sakho ngamaholide asebusika
Indlela yokuvikela izinwele zakho ebusika
Ukunakekelwa kwesikhumba sasebusika
Kuncane kakhulu okusele kuze kufike uNyaka Omusha, okusho ukuthi sekuyisikhathi sokucabanga ngokulungiselela iholide.
Ngokuqinisekile usuvele ukhethe ingubo, izimonyo kanye nesitayela futhi ufuna ukuphelela. Udinga ukuqonda ukuthi ngaphezu kwesithombe esiphumelelayo, ukuze ubukeke kahle, kuyadingeka ukusebenza esimweni sesikhumba nezinwele.
Futhi ube nesisindo esifanele (noma okungenani silwele). Namuhla ake sikhulume ngokuthi ungasilungiselela kanjani isikhumba sakho nezinwele zeholidi ezinsukwini eziyi-19 nje.
Ukuze ugcine izinwele zakho zibukeka zizinhle futhi kulula ukwenza isitayela, zinaka ngokukhethekile emavikini ambalwa alandelayo. Ngokuqondene:
Yenza imaski enomsoco izikhathi ezi-2 ngesonto. Kuhle uma uyifaka ezinweleni ezimanzi futhi uzifudumeze kancane ngomshini wokomisa izinwele. Ubude be-mask imizuzu engu-30;
ukushintshana phakathi kwama-moisturizing kanye nama-conditioner okondlayo ukuze ondle futhi athambisa izinwele (imikhiqizo yochwepheshe ihamba phambili);
qiniseka ukuthi usebenzisa amafutha ezinwele emva kokugeza konke;
uma udaya izinwele zakho futhi udinga ukulungisa, kwenze isonto ngaphambi koNyaka Omusha;
kanye ngesonto yenza imaski yamafutha kakhukhunathi, okubhekwa njengento engcono kakhulu ebusika.
Okubalulekile: uma uhlela ukushintsha kakhulu umbala wezinwele zakho, ungakwenzi ngaphambi kwamaholide. Kukhona ingozi yokuthi ngeke uwuthande umphumela futhi uzizwe ungavikelekile. Kuyadabukisa nakakhulu uma ukudaya kunomphumela omubi ezinweleni.
Ngokwemvelo, unakekela isikhumba sakho sobuso futhi asikho isidingo sokukutshela ngokunakekelwa okuyisisekelo. Ngakho-ke ake sikhulume ngemithi eyengeziwe ezokwenza ngcono isimo sesikhumba futhi isinike ukukhanya.
Engeza imithi elandelayo esimisweni sakho:
Sebenzisa ama-ampoules kavithamini C. Ngaphambi kokulala, sebenzisa i-vitamin C ewuketshezi ebusweni bakho imizuzu engu-15-20, bese uyigeza nge-toner ebusweni. Faka ukhilimu wasebusuku. Lokhu kwelashwa kuzothuthukisa ukuqina kwesikhumba kanye nebala, kanye nokuqinisa ama-pores.
Ukubhucunga. Njalo kusihlwa, usebenzisa ukhilimu wasebusuku, yenza i-massage yobuso obukhanyayo: okokuqala, shaya izintende zakho esikhumbeni ukuze isikhumba siphenduke sibe bomvu kancane. Bese uya ekuluma kancane bese uqedela inqubo futhi ngokushaya izandla. Khumbula, udinga ukwenza i-massage emigqeni ye-massage.
Kanye ngesonto, yenza i-mask yamafutha usebenzisa amafutha oyithandayo: ukushisa amafutha emanzini okugeza, sebenzisa ebusweni obumanzi futhi umboze ithawula elimanzi. Susa amafutha asele ngemva kwemizuzu engu-20.
Okubalulekile: uma unethuba, bhalisela ukucwecwa okukhanyayo ne-beautician ukuze isikhumba sakho sibukeke sisisha ngangokunokwenzeka.